Isitudiyo sesiXeko saseBryson w/Itubhu eHotyo Kufuphi nokuLoba! - I-Airbnb
Isitudiyo sesiXeko saseBryson w/Itubhu eHotyo Kufuphi nokuLoba!
Bhukisha indawo ephumlayo yangaphandle eya 'eTree Haven,' igumbi lokuhlambela eli-1 lestudiyo sokurenta eBryson City. Ukuhlala ngaphakathi kwemizuzu yeendawo ezininzi zokuloba eziphezulu kwaye ujikelezwe yimithi emide, le ndlu yothando ye-2 ilungile kwabo bafuna indawo yokuhlala kunye ne-adventure. Ukongeza kokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba, kunye netyhubhu ekhoyo ehlala ngaphakathi kwemizuzu yekhaya, 'i-Tree Haven' ikwabonelela ngebhafu eshushu yabucala, umgangatho osongezelayo, indawo yomlilo yamatye, kunye nokunye!
Studio: Ibhedi yeKumkanikazi
Ngomthi ophefumlayo osika ngaphakathi kwekhaya, iisilingi eziphakamileyo, kunye ne-rustic-5-star feel, le ndlu yesitudiyo sisiseko sekhaya esigqibeleleyo sokubalekela kuthando okanye i-adventure yangaphandle.
Emva kosuku kwizinto, buyela kwindawo yokuhlala kwaye uvule indawo yomlilo. Njengoko uphumle kumandlalo wakho wokumkanikazi kwaye ubukele iscreen esisicaba seSmart TV, uya kuhlanjwa kukukhanya kwendalo ngeefestile ezinkulu. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ligcwele ii-countertops ezinwetshiweyo kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici, inayo yonke into oya kuyidinga ukwenza umjelo wakho wangaphakathi we-Iron Chef.
Emva kwesidlo sangokuhlwa, zipholela kwibhafu eshushu kwidekhi yokusonga, ebonisa imbonakalo entle kunye nemibono echukumisayo yesibhakabhaka esinamachokoza eenkwenkwezi.
* QAPHELA: Umninimzi uhlala kwisiza, kwiyunithi eyahlukileyo engezantsi, kwaye unokuba khona ngexesha lokuhlala kwakho *
Ifakwe embindini wezona ntaba zindala eMhlabeni, 'i-Tree Haven' ibonelela ngokufikelela kuhambo olungenakoyiswa kunye ne-skiing enqumla ilizwe kwimizuzu nje. Ukuba uqhubela phambili nje kancinci, uya kufumana i-kayaking, ukukhwela amatye, intenetya, ukufota, ukuqubha, ukuzingela, ukukhwela isikhephe, nokunye!
Eyaziwa ngokuba 'yi-mecca yokuloba ekuMazantsi-mpuma,' iSwain County ilikhaya kwiindawo ezingama-26 zokuloba zaseSwain County ezibandakanywe kwimilambo emi-4, inkitha yemilambo yeentaba, kunye namachibi amakhulu ama-2.
Kwakhona ngaphakathi kwi-drive emfutshane ye-cabin, uya kufumana iinketho eziphezulu zokuthengisa kunye nokutya e-Bryson City, e-Sylva, e-Waynesville nase-Asheville, iziza ze-Civil War, Ugcino lwaseIndiya, kunye ne-Harrah's Cherokee Casino.
Izimvo eziyi-21 015